के यो क्रुर हत्याकाे मुख्य याेजनाकार साउदी राजकुमार हुन्? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सविन राई मंसिर २
साउदी राजकुमार मोहम्मद बीन सलमान
साउदी अरेबीयाका राजकुमार मोहम्मद बीन सलमान साउदी अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्।
उनले सन् २०१६ मा देशमा दिगो विकास ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ एक अवधारणा सार्वजनिक गरे। सो अवधारणा थियो ‘भिजन २०३०’ अर्थात सन् २०३० सम्ममा सलमान साउदीलाई अर्थतन्त्रको हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन चाहन्थे। राजकुमार सलमानलाई उनका पिता साउदी राजा सलमान बिन अबदुललाजिज अल साउदले गत वर्षमात्र मस्तिष्कमा समस्या आएपछि उत्तराधिकारी बनाएका थिए।
यतिबेला उनी देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उनी देशको रक्षा मन्त्रालय, अर्थ र विकास परियोजना परिषद् तथा राजनीतिक र सुरक्षा परिषद्का समेत प्रमुख हुन्।
साउदी अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड सलमानले बितेका केही वर्षभित्र कैयौं उल्लेखनीय कार्यहरु गरे। जसका कारण उनले संसारभरबाट प्रशंसा र स्याबासी बटुले। तर गत महिना भएको पत्रकार जमाल खशोग्गी हत्या प्रकरणमा मुछिएका राजकुमार सलमान फेरि प्रशंसाबाट विमुख भएका छन्। उनी पहिले अधिकारवादी कहलिन्थे भने यतिबेला हत्याराको रुपमा चिनिएका छन्।
मुस्लिम समुदायमा महिलाविरुद्ध कडा नीति र धार्मिक कानुनहरु हुन्छन्। राजकुमार सलमानले यसवर्ष त्यस्ता कैयौं महिलाविरोधी कानुनहरुलाई परिवर्तन गरिदिए। सलमानले महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै सिर्जना गरे जसले गर्दा त्यहाँका महिलाले पहिलाभन्दा स्वतन्त्र महशुस गरिरहेका छन्।
यो वर्षको जनवरी महिनादेखि साउदीमा महिलाले फुटबल रंगशालामै गएर हेर्न पाएका छन्। महिलालाई पुरुषसँगै बसेर यसअघि रंगशालामा फुटबल हेर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। आफ्नो विकासको परियोजना सफल बनाउन उनले महिलाको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका थिए।
त्यसको एक महिना नपुग्दै फ्रेब्रुअरीमा फेरि साउदीले महिलाहरुका लागि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो। साउदीले महिलालाई पनि पुरुष सरह सैन्य क्षेत्रमा भर्ती गराउन सुरुवात गर्यो। सलमानकै पहलमा महिलाले त्यहाँ सेना र प्रहरीमा जागिर खान पाइरहेका छन्। यसअघि साउदीमा पुरुषहरुमात्र सेना र प्रहरीमा भर्ति हुन पाउँथे।
राजकुमार सलमानले लगातार महिला अधिकारलाई वकालत गर्दै गए। त्यसको परिणामस्वरुप त्यहाँ अर्को निर्णय भयो। सलमानले महिलाले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स बनाउन पाउने प्रावधानलाई स्वीकृत गरिदिएपछि महिलाहरु यतिबेला साउदीमा व्यक्तिगत सवारीहरु कुदाउँछन्। सलमानकै कारण साउदीमा महिलाहरुले कला क्षेत्रमा पुरुष सरह कार्य गर्न पाउँछन्।
यस्तै किसिमका विकासमूलक परियोजनालाई सफल पार्दै अघि बढेका राजकुमार सलमान कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको विकासको कोशेढुंगा सावित भए। महिलाप्रति उदार र विकासको नीति अवलम्बन गरेकोभन्दै अमेरिका, बेलायत, राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न मानब अधिकारवादी संस्थाले राजकुमारको संसारभरबाट प्रशंसा गरे। तर यमन आक्रमण, कतार कुटनीतिक संकट, लेवनानी प्रधानमन्त्रीको राजिनामा तथा पत्रकार जमाल खशोगी हत्या प्रकरणका कारण साउदी राजकुमार सलमान ‘अधिकारवादीदेखि हत्यारा तथा मानवता विरोधी’को रुपमा परिचित हुन थालेका छन्।
हत्या गरिएका पत्रकार जमाल खशोगी
सन् २०१५ मा यमनमा हुथी विद्रोहीका कारण त्यहाँ राष्ट्रपति अब्द्राबु मनसुर हादी देश छाडेर भाग्न बाध्य भएका थिए। विद्रोहीबाट सत्ता फिर्ता गर्ने उदेश्यका साथ साउदी अरेबीयाको नेतृत्वमा अन्य ७ अरब राज्यले यमनमा कारवाही सुरु गरेको थियो। कारवाही अझै जारी छ। सो क्रममा विद्रोही परास्त गर्ने कैयौं आक्रमण भएका छन्। यद्यपि विद्रोहीभन्दा बढी सर्वसाधारणहरुले त्यहाँ ज्यान गुमाइरहेका छन्। यसै वर्षको अगस्टमा साउदी आक्रमणमा यमनमा २९ बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसको विश्वभरबाट निन्दा भएको थियो। त्यसबेला अमेरिकासहति एमनेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाले साउदी राजकुमार सलमानको आलोचना गरेका थिए।
कतार नाकाबन्दीकाे अाैचित्य के?
सन् २०१७ को जुन महिनादेखि साउदी र कतारबीचको राजनीतिक र कुटनीतिक संकट चुलिएको छ। कतारले आतंककारी समुहलाई प्रश्रय दिएको भन्दै साउदी अरेबीयाले कतारसँग राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको थियो। साउदीले अन्य देशहरु यूएइ, बहराइन, इजिप्ट, माल्दिभ्स, सेनेगल, जोर्डन लगायतका देशहरुलाई समेत कतारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न उक्साएको थियो। उनीहरुले कतारमा आफ्नो विमान प्रतिबन्ध लगाउनदेखि नाकाबन्दी समेत गरेका थिए। तर उनीहरुले आतंककारी गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको भन्ने विषय अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। कतारी अधिकारीहरुले कतारको समृद्धि साउदी अरेबीयाले देख्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ। कतारसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा असफल सलमान बारम्बार आलोचनाको घेरामा परिरहन्छन्।
सन् २०१७ नोभेम्बर ४ तारिखमा लेबनानी प्रधानमन्त्री साद हरिरिले साउदी भ्रमणकै क्रममा आकस्मत राजीनामा दिए। हरिरिले इरान तथा हिजबुल्लाह समूहको प्रभुत्व पूर्वी क्षेत्रमा बढेकाले आफ्नो हत्या हुने संभावना भएका कारण आफूले विदेशबाटै पदबाट राजिनामा दिएको जनाएका थिए। इरानले हरिरिको राजिनामा अमेरिका, इजरायल, साउदी अरब कारण आएको बताएको थियो। लेवनानी राष्ट्रपति माइकल ओउनले समेत उनको हत्या हुने विषयलाई पत्याएनन्। उनले साउदीले हरिरिलाई अपहरण गरेर राजिनामा दिन लगाएको आरोप लगाए। हरिरि जब लेवनान फर्किए उनले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजिनामा फिर्ता लिए। साउदी अरेबीयामा आफूमाथि कस्तो व्यवहार भयो र किन राजीनामा घोषणा गर्नुपर्याे भन्नेबारे उनले अहिलेसम्म सबै कुरा गोप्य राखेका छन्। लेवनानको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेकोभन्दै लेवनानले साउदी राजकुमारको आलोचना गर्दै आएको छ।
सलमान खशाेगी हत्याका मुख्य याेजनाकार: सिअाइए
हालै राजकुमार सलमान पत्रकार जमाल खशोगी हत्या प्रकरणमा मुछिएका छन्। टर्कीस्थित साउदी वाणिज्य दुतावासमा साउदी पत्रकार खशोगीको हत्या गत अक्टोबरमा भएको थियो। अक्टोबर २ तारिखमा दुतावास पुगेका खशोगी वेपत्ता भएका थिए।
साउदी नागरिक उनी आफ्नी प्रेमीकासँग विवाह गर्न चाहान्थे। त्यसैकारण आफ्नी पत्नीसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको कागजात लिन उनी टर्किस दूतावास गएका थिए। पहिले खशोगी दुतावासबाट निस्केको बताउने दुतावासलेपछि दुतावासमै झडपका क्रममा उनको मृत्यु भएको स्वीकार गरेको थियो। शनिबारमात्र खशोगीको हत्या राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानकै निर्देशनमा भएको अमेरिकी गुप्तचर विभाग सिआइएले निष्कर्ष निकालेको छ। गुप्तचर विभाग नजिकका स्रोतहरुले सलमानकै निर्देशनमा खशोगी हत्या भएका प्रमाणबारे विस्तृत मूल्यांकन गरिरहेका छन्। सिआइएले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटना गराउन राजकुमारकै संलग्नता बाहेक सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
यद्यपि अमेरिकाले आइतबार आफूहरु अझै खशोगी हत्याको निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताएको छ। साउदी अरेबीयाले भने सिआइएको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। साउदीले राजकुमार सलमानलाई यस प्रकरणको योजनाबारे जानकारी नभएको उनीहरुको दाबी छ। टर्कीले समेत यस हत्या प्रकरणमा उच्च व्यक्तिको संलग्नता भएको सुरुवातदेखि बताउँदै आएको छ। टर्कीले सांकेतिक रुपमा सलमान नै घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको बताउँदै आएको छ। यहाँ रहस्यमय कुरा के छ भने हत्या स्वीकारे पनि साउदीले खसोगीको शव सार्वजनिक गरेको छैन। गायब पारिएको छ। कुनै समय साउदी राजपरिवारसँग राम्रो सम्बन्ध भएका खसोगी र साउदीको सम्बन्धमा केही समययता चिसोपना छाएको थियो।
गतवर्ष साउदी छाडेर अमेरिका पुगेका उनले वासिङटन पोस्ट पत्रिकाबाट साउदी सरकारको नीति, राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान, राजा सलमानको आलोचना गर्दै आएका थिए। साउदीको आलोचना गरेकै कारण खशोगीको हत्या भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
साउदी अर्थतन्त्रका योजनाकार, दिगो विकासको मेरुदण्ड राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यस्तै घटना र परिघटनाका कारण विश्वमाझ हत्याराको उपमाले चिनिन थालेका छन्। (बीबीसीसहित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट अनुवाद)
प्रकाशित २ मंसिर २०७५, आइतबार | 2018-11-18 15:52:04
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा दीर्घकालिन विकासका कडा कानूनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
भारतको अरुणाञ्चलमा एम्बुस विस्फोट, विधायकसहित ११ जनाको मृत्यु
लोकसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनु एक दिन अघि भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशमा उग्रपन्थी आक्रमणमा एक जना विधायकसहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ।